सनसनीपूर्ण हारले उब्जाएका प्रश्नैप्रश्न
सराेज तामाङ शनिबार, साउन ३१, २०७७, १७:४०
काठमाडौं- च्याम्पियन्स लिगमा बायर्न म्युनिकसँग ८-२ गोलको फराकिलो हारले स्पेनिस क्लब बार्सिलोनालाई मात्रै चिन्तित बनाएको छैन, टिमका खेलाडीको मात्रै मन दुःखेको छैन। बार्सिलोनाका समग्र समर्थक आश्चर्यमा छन्। आखिर बार्सिलोना चुक्यो कहाँ?
जर्मन क्लब बायर्न म्युनिक च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्दा बार्सिलोना भने क्वार्टरफाइनलबाटै घर फर्किन बाध्य भयो। बार्सिलोनाले ७४ वर्षपछि ८ गोल खाएको हो। सन् १९४६ मा कोपा डेल रे फुटबलमा बार्सिलोना सेभियासँग ८-० गोलअन्तरले पराजित भएको थियो।
फराकिलो गोल अन्तरले पराजित भएपछि खेलप्रेमीदेखि खेलाडी र प्रशिक्षकसम्मले धेरै प्रश्न उठाएका छन्। बार्सिलोना कमजोर टिम हो? बार्सिलोनाको स्तर घटेको कि विपक्षी टिमको खेल सुध्रिएको? बार्सिलोनाको दबदबाको अन्त्य भएको हो? प्रशिक्षक क्विके सेटियनको रणनीति फेल खाएको कि खेलाडीले खेल्न नसकेको? यस्ता प्रश्न उठिरहेका बेला बार्सिलोना टिममा भने यी यावत् प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न सुरु भएको छ।
प्रशिक्षक सेटियन यो हारलाई दर्दनाक भन्छन्। ‘यो एक दर्दनाक हार हो। हामीले राम्रो सुरुवात गर्ने प्रयास गर्यौं तर विपक्षी टिमले हामीभन्दा हरेक कुरामा राम्रो खेल्यो।’
हुन त सुरुवाती समयदेखि नै बार्सिलोना दबाबमा थियो। खेलको चौथो मिनेटमा रोबर्ट लेवान्डोस्कीको पासमा थोमस मुलरको गोलसँगै बायर्नले अग्रता लिइहाल्यो। तर, बायर्नका डेबिड एलबाको आत्मघाती गोलले बार्सिलोनालाई १–१ गोलको बराबरीमा फर्कायो। पहिलो गोल खाएको गल्तीलाई सुधार गर्दै बार्सिलोनाले यहीबाट लय समात्नु पर्थ्याे। तर, भत्किएको बार्सिलोनाको डिफेन्स एकपछि अर्को गर्दै झनै ठूलो भ्वाङ पर्दै गयो।
हारपछि बार्सिलोनाका डिफेन्डर जिरार्ड पिकेले आफू धेरै दुःखमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘हामी सबै पीडामा छौं। हामी यसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। केही भन्न लायक छैन,’ उनले भनेका छन्।
बायर्नको मिडफिल्डर उतिकै चुस्त रह्यो भने फरवार्ड लाइन चुक्दै चुकेन। लेवान्डोस्की, मुलर, सर्ज गिनाब्री, इभान पेरिसिकले सुरुवाती समयदेखि नै बार्सिलोनाका डिफेन्डरलाई व्यस्त राखे।
२१औं मिनेटमा पेरिसिकले गोल गर्दै २-१ गोलको अग्रता लिएको बायर्नले २७औं मिनेटमा गिनाब्रीको गोलबाट ३-१ गोलको अग्रता बनायो। त्यसको चार मिनेटपछि अर्थात् खेलको ३१औं मिनेटमा नै मुलरले व्यक्तिगत दोस्रो गोल थप्दै बायर्नलाई पहिलो हाफसम्म ४-१ गोलको अग्रता दिलाए।
पहिलो हाफमा तीन गोलले पछि परे पनि बार्सिलोनाका लागि दोस्रो हाफमा खेलमा फर्किने मौका थियो। यसको राम्रो उदाहरण फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) र एटलान्टाबीचको खेललाई पनि लिन सकिन्छ। एटलान्टासँग पिएसजी ८९औं मिनेटसम्म १-० गोलले पछि परेको थियो। तर, बाँकी समयमा दुई गोल गर्दै पिएसजी च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा पुगेको तथ्य छ।
उत्कृष्ट लय समात्ने हो भने बार्सिलोनाका लागि त्यो तीन गोलको फरक केही थिएन। तर खेलको अन्तिम मिनेटसम्म पनि त्यसको छनक देखिएन।
खेलको ५७औं मिनेटमा लुइस स्वारेजले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई ४-२ गोलको स्थितिमा ल्याए। केही आशा पलायो। बार्सिलोनाका खेलाडीमा केही उत्साह छायो। प्रशिक्षक सेटियन मुस्कुराए। तर, उनको मुस्कान र खेलाडीको उत्साह फेरि सेलायो। ६३औं मिनेटमा जोसुआ किमिचले गोल गर्दै बायर्नलाई ५-२ को अग्रता दिलाइहाले।
बायर्नलाई मेस्सीको डर थियो। बार्सिलोनालाई लेवान्डोस्कीको। तर, बार्सिलोनाविरुद्ध बायर्नमा एकसे एक खेलाडी लेवान्डोस्की निस्किए। ७५औं मिनेटमा गिनाब्रीको स्थानमा परिवर्तित खेलाडीको रूपमा मैदानमा छिरेका ब्राजिलियन विंगर फिलिपे कौटिन्होको त कुरै नगरौं। कौटिन्हो बार्सिलोनाकै खेलाडी हुन्, तर लामो समय बेन्चमा रहिरहेका कौटिन्हो गत वर्ष मात्रै बायर्नमा लोनमा गएका थिए।
यो खेलले कौटिन्होको खेल करियरमा नयाँ मोडसमेत ल्याएको छ। उनले आफ्नै क्लबविरुद्ध दुई गोल गर्नुका साथै एक एसिस्ट गरे। कौटिन्होको पासमा लेवान्डोस्कीले हेडर गोल गर्दै बायर्नलाई ६-२ गोलको अग्रता दिलाउँदा प्रशिक्षक सेटियनले टाउकोमा हात राखेका थिए।
बायर्नले यो ७ मिनेटको समयमा तीन गोल गर्न सफल भयो। ८५औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका कौटिन्होले ८९औं मिनेटमा अर्को गोल थप्दा बायर्नले बार्सिलोनाविरुद्ध ८-२ गोलको जित निकाल्यो। कौटिन्होले गोल गर्दा कप्तान मेस्सी, लुइस स्वारेज, जिरार्ड पिके र प्रशिक्षक सेटियनको अनुहारमा निराशसँगै अथाह पीडाको भाव झल्किन्थ्यो।
कप्तान मेस्सीमाथि सबैको विश्वास र भरोसा थियो। तर, त्यो विश्वासलाई मेस्सीले न्याय दिन सकेनन्। हुन त मेस्सी यस्ता ठूला प्रतियोगिताको महत्वपूर्ण खेलमा सधैं चुक्ने नै गर्छन्। अर्जेन्टिनाको लागि त्यो, कोपा अमेरिका फुटबलमा होस् या विश्वकपमा। कप्तान मेस्सीले बायर्नको पोस्टमा २-३ पटक प्रहार गरे। तर, उनको प्रहार फितलो रह्यो।
बार्सिलोनाविरुद्ध दुई गोल गरेका मुलरलाई विश्वकप २०१४ को सेमिफाइनलमा ब्राजिलविरुद्धको खेलको झझल्को आइरह्यो। जितपछि मुलरले भने, ‘२०१४ मा ब्राजिलसँगको विश्वकप खेलमा जस्तो नियन्त्रण कहिल्यै थिएन। यस्तो बेलाबखत हुन्छ। तर यो विशेष रात बन्यो। सबैले राम्रो खेले। परिवर्तित खेलाडीले पनि उत्कृष्ट खेले। एकदमै खुशी छु।’
बर्खास्तमा पर्छन् सेटियन?
बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधि नजिक पुगेर अन्तिममा चुकेको थियो। रियल मड्रिडलाई लिगको अन्तिमतिर आइपुग्दा उपाधि सुम्पिएको बार्सिलोना यो सिजन ट्रफिविहीन बनेको छ।
बार्सिलोना उपाधि विहीन २००७-०८ को सिजनपछि पहिलो पटक बनेको हो। गत जनवरीमा प्रशिक्षक एर्नेस्टो भालभर्देलाई निकाल्दै बार्सिलोनाले नयाँ प्रशिक्षकको रुपमा सेटियनलाई नियुक्त गरेको थियो। त्यसबेला बार्सिलोना ला लिगाको शीर्ष स्थानमा थियो। स्पेनिस सुपर कपको सेमिफाइनलमा एथ्लेटिको मड्रिडसँग पराजित भएपछि भालभर्देलाई निकालेको थियो।
भालभर्देभन्दा पनि अहिले सेटियन कठिन स्थितिमा पुगेका छन्। सेटियनलाई बार्सिलोनाले ल्याउनुको मुख्य कारण नै च्याम्पियन्स लिग र ला लिगा थियो। तर, दुवै प्रतियोगितामा सेटियन असफल भइसकेका छन्।
जब प्रतियोगितामा क्लबले नराम्रो नतिजा निकाल्छ, सबै भन्दा पहिले धरापमा पर्छन् प्रशिक्षक। यो विश्वव्यापी फुटबलको चलन हो। यहि चलन थियो र चलिआएको छ। केही दिनअघि मात्रै इटालियन क्लब युभेन्टस च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा लियोन क्लबसँग पराजित भयो। त्यसको केही घण्टामै प्रशिक्षक मौरिजियो सारी बर्खास्तमा परे। उनको स्थानमा आफ्ना पूर्व खेलाडी आन्द्रे पिर्लोलाई नियुक्त गर्‍याे।
फुटबलमा सबैभन्दा जोखिम पद नै प्रशिक्षकको हो। बार्सिलोनाका लागि असफल देखिएका प्रशिक्षक सेटियन अब के गर्छन्? क्लबले उनको बारेमा के सोचिरहेको छ? अनि खेलाडी यो हारको बारे के भन्छन्?